I-E-Export-Qala i-E-Export ngePropar ngoku!
Ulawulo kunye nokuBuya koLawulo
Iindawo zeNtengiso zaseYurophu
Iindawo zentengiso zehlabathi
Iindawo zemarike zaseTurkey
Ukungena Qalisa ngoku!
Fumana isabelo sakho kwezona ndawo zentengiso zinkulu zaseYurophu ezithengisa iiyunithi ezizigidi ezingama-48 ngosuku.
I-Propar Amazon ngumboneleli wenkonzo osemthethweni.
Thengisa kwihlabathi liphela Zuza ngakumbi!
I-Turkey kuphela kunye nokukhokela emhlabeni UKUTHUMELWA KWANGAPHANDLE isisombululo
Cofa, thelekisa, BONA umohluko.
Ukuthumela ngaphandle ngeSiza se-E-yorhwebo
I-96% yeendawo zorhwebo ezivulwe eTurkey zivaliwe kunyaka wokuqala.
Xa uqala ukuthumela ngaphandle nge-e-commerce yeephakheji ezinefuthe eliphantsi, uya kuba wedwa kuzo zonke iinkqubo.
Intengiso ye-e-yorhwebo yonyaka yabathengisi bePropars ikhula nge-300%.
Ukuthumela ngaphandle ngePropars
Bonke abo baqala ukuthumela i-imeyile kunye neePropars zithengiswe kwihlabathi kunyaka wokuqala. I-64% yabo bafumene inkonzo yasimahla yokucebisa iiPropars baqala ukuthumela i-e-iinyanga ezintathu zokuqala.
Ukuthengiswa kwabasebenzisi abathengisela iindawo zentengiso ezi-3 nangaphezulu kunyuka nge-156%.
Ngenkqubo yokuguqulela ngokuzenzekelayo, ulwazi lwemveliso oyibhalayo ngesiTurkey luguqulelwa ngokuzenzekelayo kulwimi lwelizwe apho uvula imarike yokuthengisa.
Ukuba uyafuna, unokongeza iinguqu zakho ezizodwa kwilizwe ngalinye kwiimveliso zakho kwiiPropars.
Ungabona kwaye ukhethe iindidi zelo lizwe ngesiTurkey kulo naliphi na ilizwe ofuna ukuthengisa iimveliso zakho kwindawo yentengiso.
Uyakwazi ukubona "izihluzi zemveliso" ngesiTurkey, ezenza iimveliso zakho zivelele kwiimarike, kwaye uzitshatise kunye nezihluzo zakho zemveliso kwaye uzivulele ukuthengiswa. Umzekelo: OKULUHLAZA kwisihluzo semveliso kuya kuvela NJENGOKULULUKHI kwimarike yase-UK.
E-Turkey, umthengi wakho waseBrithani ubona isicathulo osithengisayo ngobukhulu be-40 njenge-6,5 kunye nomthengi wakho waseMelika njenge-9, ngoko uya kufezekisa ukwaneliseka kwabathengi ngokuthengisa imveliso efanelekileyo.
Ukukhethwa kwamashishini ayi-1500 + ziiPropars.
"Unokudibanisa indawo yakho ye-e-commerce okanye i-erp accounting program kwi-Propar kwaye ungeze i-e-export feature. Kubalulekile ukulawula njengoko kuthengisa ".
Qalisa ukuthumela i-E-Export kumaNyathelo amaThathu ngePropars
Ipropars zikuvulela iivenkile zayo simahla kwiqonga ofuna ukulithengisa.
Ikuvumela ukuba ufumane amaxabiso akhethekileyo anesaphulelo kwiinkampani zemithwalo yemvumelwano kwaye wenze ukuhambisa ngokulula.
Iimveliso ozilayisha kwiiPropars zithengiswa kumazwe owafunayo.
NgePropar, qala ukuthengisa ngokucofa kube kanye kwiimarike zehlabathi ezinje ngeAmazon, Ebay, Allegro, Wish kunye neEtsy!
Lawula iiodolo kwiscreen esinye
Qokelela zonke iiodolo zakho kwiscreen esinye, i-invoyisi ngokucofa kanye! Unokukhupha ii-invoyisi ezininzi kwii-odolo zakho ezivela kwiimarike kunye neyakho indawo ye-e-commerce kwaye uprinte ifom yempahla eninzi.
Ngokulayisha iimveliso zakho kwiiPropars kube kanye kuphela, unokuzithengisa kuzo zonke iisayithi ngonqakrazo olunye.
Awunakukhathazeka malunga nokuthumela ngokwahlukeneyo kwimveliso nganye. Amawakawaka eemveliso aya kuthengiswa kwimizuzwana embalwa kwiivenkile ozikhethileyo.
Nceda fowunela abameli bethu malunga neephakeji zethu.
Ukuthenga kwiimarike endaweni yabathengi yabucala ye-e-commerce
Izizathu ezili-10 eziphezulu zokuba kutheni
Abathengi kwindawo yentengisoAbaThengi beSayithi ye-E-Commerce
Umgaqo-nkqubo wexabiso elifanelekileyo
Ukuthenga okusebenzayo kunye nokulula
Indawo yokuthelekisa ixabiso
Uluhlu lwemveliso ebanzi
Ukuqonda okuqhelekileyo kwezorhwebo ngoku kushiye indawo yayo kwi-e-commerce. Nangona kunjalo, i-e-commerce ayikuvumeli kuphela ukufikelela kuzo zonke izixeko zelizwe lakho. Kwangaxeshanye, amazwe anika ithuba lokuwela amazwekazi. Nge-e-export, ungazisa iimveliso zakho kubathengi bakho abanokubakho naphi na emhlabeni.
Iimarike zehlabathi ngoku ziziko lokuthenga elikhulu kwaye elibonakalayo apho bonke abathengi kwihlabathi liphela badibana khona. Ukuvula ivenkile kula maqonga kuthetha ukuba neshishini eliya kutyelelwa lihlabathi liphela.
Nangona i-e-export iye yathandwa kakhulu, ngakumbi ngomsebenzi wotshintshiselwano lwangaphandle kwiminyaka yakutshanje, amashishini anogcino oluthile malunga nalo mba.
Okokuqala, ii-SME zethu, ezingenalo ulwazi olwaneleyo, zicinga ukuba azikwazi ukumelana nezi ntengiselwano. Amashishini amakhulu, kwelinye icala, anobunzima bokuthatha amanyathelo afanelekileyo.
Nangona kunjalo, iinkxaso zesoftware, inkuthazo karhulumente, iinkonzo zentlawulo, iinkonzo zolungiselelo ziphuhliswe kakhulu. Ngoku, nokuba singakanani na isikali okanye imveliso yeshishini, ukuthunyelwa ngaphandle kwe-imeyile kunokuqalisa ngokukhawuleza nangokulula.
I-Propar liqabane lesisombululo samaqonga ehlabathi eTurkey. Ngesoftware yethu ephucukileyo kunye neqela lobuchwephesha, sizisa ngakumbi nangakumbi amashishini ethu ukuthumela ngaphandle kwe-e.
Nge-E-Export Ukuzuza ngeRhafu yeMali
I-lira yaseTurkey ilandele itshathi eguquguqukayo kwiminyaka yakutshanje kwaye ngelishwa ifumene ukuhla okubalulekileyo. Nangona kunjalo, kukho indlela yokuguqula le meko ibe yinzuzo.
Ukuthengisa iimveliso zakho ngokuxabisa amaxabiso otshintshiselwano kuvumela iimveliso zakho ukuba zifumane ixabiso kwiTL. Iimveliso ozivelisa kwi-TL eTurkey zithengiswa phesheya ngeemali ezifana ne-USD, i-euro kunye ne-sterling. Ngale ndlela, wongeza inzuzo yakho nge-e-export. Ngaphandle koko; Le yenye nje yeenzuzo zokuthumela ngaphandle kwe-imeyile.
Ukuthunyelwa kwakho ngaphakathi kwendawo yokuthumela ngaphandle kukhululwe kwirhafu eTurkey. Ngaphezu koko; Ukuba uhlawule nayiphi na i-VAT ngelixa uthenga le mveliso, iya kukuvumela ukuba ufumane le mali.
Ukwahlulahlula urhwebo lwakho kwiitshaneli ezininzi ngamaxabiso otshintshiselwano kubonelela ngemodeli yengeniso ekhuselekileyo yeshishini lakho. Kwaye kukukhusela ekuguquguqukeni kwimarike yasekhaya.
Ukuthengisa kulo lonke ihlabathi
Ngokusetyenziswa ngokubanzi kwe-intanethi, ihlabathi liye ladityaniswa nehlabathi kwaye, ngandlela ithile, lancipha. Imigama ayisekho kude kangako. Ishishini eTurkey linokwazisa ngokulula imveliso yalo kubathengi abanokubakho kwelinye ilizwekazi kwaye linokuyihambisa ngokukhawuleza ukuba iodolo yamkelwa.
Awudingi ukucinga malunga nokuba bangaphi abantu onokuthi uthengise imveliso oyivelisayo kwisixeko okanye kwilizwe lakho. Umbuzo obalulekileyo ngulo; bangaphi abantu emhlabeni onokuthi ubathengisele yona.
Kutheni ungaweli imida xa ukwazi ukufikelela kwihlabathi liphela?
Qhagamshelana nathi ngoku!
Iipropathi zeTurkey kuphela kunye nesisombululo esikhokelela kwihlabathi se-E-EXPORT. Liqabane lenkonzo yeAmazon, i-Ebay, i-Etsy kunye nePayooner. Ixhaswa yiKOSGEB kunye neTürk Telekom.
© 2020 Iinkqubo. Onke amalungelo agciniwe.
i-invoyisi kunye ne-e-yogcino
Ikhontrakthi kunye nemigaqo-nkqubo